ပီတိမျက်ရည်ကျရတဲ့ နေ့လေးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - Duwun Quiz
ပီတိမျက်ရည်ကျရတဲ့ နေ့လေးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခိုင်နှင်းဝေ ဦးစီးတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းဟာ ဒီနေ့(မေ၁၄ရက်)မှာ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်တဲ့ အိမ်ထောင်(၄)စုအတွက် သွားရောက်လှူ ဒါန်းဖြစ်တယ်လိုက သိရပါတယ်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်တဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကို ခိုင်နှင်းဝေတို့ ပရဟိတအသင်းက သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဟာ အခုဆိုရင် တတိယအကြိမ်မြောက် ရှိလို့နေခဲ့ပါပြီ။
တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်လှူဒါန်းဖြစ်နေတဲ့ သူတို့အသင်းရဲ့ အလှူဖြစ်ပြီး ပီတိမျက်ရည်များ ကျရတဲ့နေ့လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးလို့ ခိုင်နှင်းဝေက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။အိမ်ထောင်စုတွေကို ပထမဆုံး လှူဒါန်းဖြစ်တုန်းကဆိုရင် ရှော့ဖြစ်သွားလောက်အောင်ကို ခံစားရတယ်လိို့ Duwun media ကို ဖြေဆိုဖူးပါတယ်။
“အိမ်ထောင်စုတွေကို တစ်လတစ်ခါတော့ ပုံမှန်လှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အမ ပထမစစလှူဒါန်းကဆိုရင် ရှော့ဖြစ်သွားမလားလို့တောင် ခံစားရတယ်။ အမက အရမ်းမျက်ရည်ခိုင်တယ်။ ဒေါသအရမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသာ မျက်ရည်ကျတတ်တာ အမကသိပ်မငိုတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်စုတွေကို စလှူတုန်းက သူတို့လည်း ဝမ်းသားပြီး အမကို ဖတ်ငို လက်အုပ်ချိီတဲ့အချိန်အမ တေ်ာတေ်ာကို စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ရှော့လည်းဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုလှူတဲ့အလှူကိုလည်း အမလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်။ ဘာနဲ့မှလည်း မတူပါဘူး။ ” ဆိုပြီး ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်စုနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ယခုလို ရေးသားထားပါသေးတယ်။
“ကျွန်မရဲ့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းမှယနေ့အလှူမှတ်တမ်းပါရှင်… ကျွန်မအပါအဝင် အဖွဲ့သားတွေ, တစ်လတစ်ခါ ပီတိမျက်ရည်များကျရတဲ့ နေ့လေးပါ…
၁။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း (လေဖြတ်ထားသည်)အသက် ရ၂နှစ်တောင်ဒဂုံမြို့နယ်. အလုပ်အကိုင်မရှိ ရပ်ကွက်မှကျွေးထားရ.
၂။ မခင်စန်းလှိုင် အသက်၄၄နှစ် သား,သမီး ရယောက်အလုပ်အကိုင်မရှိ , နေစရာမရှိ , ယောက်ကျားဆုံးတာ၁၀လရှိပြီ…
၃။ မခင်စန်းဦး အသက်၃၉နှစ် သား,သမီး ၈ယောက်ယောက်ကျားဆုံးတာ၃နှစ်ရှိ, ၂ရက်လောက်နေမှအဝတ်လျှော်ရသည် တစ်ခါလျှော် ၁၅၀၀လောက်ရ…
၄။ ဒေါ်ခင်ကြိုင် အသက်ရ၄နှစ် သားသမီး၅ယောက်, ၂ယောက်ဆုံး. နေစရာမရှိ လမ်းဘေးအမိုးထိုးနေရ.” ဆိုပြီး ပြောထားတာ အိမ်ထောင်စု(၄)စုအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သံတမန် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူမတတ်စွမ်းသလောက် အားတက်သရော ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရဟိတအလုပ်တွေကို တစိုက်မက်မက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ပပျောက်ဖို့ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သံန႖ိဋ္ဌာန်ချထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : ခိုင်နှင်းဝေ FB
Next story ဧငြိမ်းဖြူရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ် အကောင့်အဟက်ခံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ရဲရင့်အောင်
Previous story ပရဟိတလုပ်ကတည်းက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံခဲ့ရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် အဟက်ခံရတာ ရိုးနေပြီလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့သမီး
ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်အတုတွေကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်
လတ်တလော ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် အဟက်ခံထားရတဲ့ ဆယ်လီများ
JW Player: self-hosted DO Space
JW Player: self-hosted AWS S3
JW Player: self-hosted AWS Cloudfront
JW Player: platform-hosted